Dhageyso+Akhriso Warbixin Ka Hadleysa Filimka Cusub Ee Al-kataa’ib. – Bogga Calamada.com
Dhageyso+Akhriso Warbixin Ka Hadleysa Filimka Cusub Ee Al-kataa’ib.
September 4, 2017 3:06 am Views: 724
Mu,asasada Al-kataa’ib ee garabka warbaahineed ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa baahisay filim cusub oo loogu magacdaray « واقعدوا لهم كل مرصد ».
Filimkan oo la daawankaro ku dhawaad Soddon iyo Shan Daqiiqo waxey Mu,asasada kusoo bandhigtay howlgalo kala duwan oo si aad ah loogu naafeynayo ciidamada Kufaarta iyo kuwa Murtadiinta.
Halkan Hoose Ka Akhriso Qoraalka Filimka.
Wuxuu Filimku bixinayaa muuqaal guud oo kuu muujinaya sida dhufeyska bariga Africa –Markii talada saartay Allaah, qaatay towjiihaadka culimada iyo dad waaya-aragga ah, lana yimid asbaabta- uu Allaah ugu fududeeyey jabinta in ka badan 10 dowladood oo saliibi ah oo dagaal toos ah iyo mid dadban kaga jira Soomaaliya si loo burburiyo ku dhaqanka Shareecada islaamka iyo loona dabargooyo Jihaadka.
Filimku wuxuu ku bilaabanayaa silsilado qaraxyo ah oo lagu ugaarsanayo gaadiidka gaashaaman ee saliibiyiinta, ciidamadooda lugta ah, gawaaridooda gurmadka iyo kuwa ciidamada daabula. Kaamirada Al-kataa’ib waxay soo bandhigeysaa gaadiidka gaashaman ee saliibiyiinta oo ay Miinadu gaashaan tirtay, Ciidamadii qalabeysan oo afka ciidda loo daray, iyo haybadii iyo kibirkii ciidankooda oo Kaamirada Al-kataa’ib ku hor baaba’day. Wuxuu ku tusayaa sababta keentay in muddo 10 sanadood ah uusan howlgalka Kufaarta Afrikaanta xaqiijin wax natiijo ah iyo sida uu noqday xaalka ciidamada saliibiyiinta shan sanadood ka dib markii isku soo faafiyeen koonfurta Soomaaliya.
Waxaa filimkan oo aad uga hadlay muhiimada dagaalka Xarbul-Cisaabaatka uu soo bandhigayaa weerar lagu xasuuqay ciidamo ka tirsan saliibiyiinta Uganda oo dhamaadkii bishii July ee la soo dhaafay ka dhacay wadada isku xirta Golweyn iyo Buula-mareer. Muuqaalku wuxuu soo tabinayaa ciidamada Mujaahidiinta oo dhagta dhiigga u daraya Kufaarta, firxadka askarta Uganda oo naftooda la baxsanaya iyo baqtigooda oo daadsan dhulkii beeraleyda ah ee lagu dagaalamay.
Weerarkan oo lagu tilmaamay midkii ugu qasaaraha badnaa ee ciidamada Uganda kala kulmaan Mujaahidiinta tan iyo markii uu dhacay weerarkii Jannaale ayaa qeyb ka ahaa Kamaa’inada iyo weerarada kadiska ah ee ku dhisan dagaalka Xarbu-Cisaabaatka ee ay Mujaahidiintu kaga jiraan bariga Africa kuwaas oo hooy iyo harsi u diiday cadowga, hamigoodana ka dhigay hal bacaad lagu lisay.
Mu’asasada Al-kataa’ib waxay filimka ku soo gudbineysaa qeyla-dhaan uu muujinayo General Subagle oo ah taliyaha howlgalka Kufaarta Afrikaanta ee Soomaaliya kaas oo ka cabanaya weerarada “Kudhufoo Kadhaqaaqa” ah ee beegsanaya saldhigyadooda iyo isku socodka gaadiidka cadowga.
Filimka Mu’asasada Al-Kataa’ib waxaa ku lifaaqan kalimaadka iyo hadalada qaar ka mid ah culimada Jihaadka oo ka sheekeynaya ahmiyadda dagaalka Xarbul-Cisaabaatka, sidoo kalena tilmaamaya in uu yahay xalka kaliya ee lagu dhiigbixin karo awoodaha ciidan ee dowladaha soo duulay.
Sheykh Dr. Ayman Ad-Dawaahir, Sheykh Yuusuf Al-Cuyeyri, Abaa Cumar As-Seyf, Sheykh Mukhtar Abuu Zubeyr iyo Sheykh Abuu Yaxya Al-Liibi ayaa ka mid ah hogaamiyeyaasha boorinaya sidoo kalena bogaadinaya xeeladaha Xarbul-Cisaabaatka.
“Dagaalka xarbul-cisaabaatka ee dhaar waa meesha ay ka liitaan ciidamada heysta hubka casriga ah sababtoo ah waxay weynayaan ahdaafta sugan ee ay fududahay in la burburiyo” sidaas waxaa oranaya Abaa Cumar As-Seyf.
“Awoodda ciidan ee Mujaahidiintu waa mid ballaaran Allaah mahadii. Waxay cadowga u diideen mid ka mid ah ujeedooyinkiisii ugu waaweynaa oo ahayd burburinta awoodda Mujaahidiinta, waxayna sii wadaan dagaal Jihaadi ah oo ku dhisan weerarada kadiska ah” sidaas waxaa oranaya Sheykh Mukhtar Abuu Zubeyr.
Asheykh Yuusuf Al-Cuyeyri ayaa isna tilmaamaya in muhiimada dagaalka xarbul-cisaabaatka iyo haziimada dhabta ah ay tahay in cadowga laga burburiyo ragbada uu u qabo dagaalka si uu u niyad jabo.
Mu’asasada Al-Kataa’ib waxay sidoo kale muuqaalkan ku soo gudbineysaa silsilado weeraro ah oo cagta lagu marinayo saldhigyada, difaacyada iyo gawaarida Maleeshiyaatka Murtadiinta.
Weeraradan waxaa ka mid ah dagaal ballaaran oo Mujaahidiintu ku xasmiyeen maleeshiyaat ku sugnaa saldhigga Goof-Gaduud, iyo weerar kamiin ah oo lagu beegsaday Kolonyo gurmad ahayd oo ka soo baxday magaalada Baydhabo. Kaamirada Al-kataa’ib waxay soo gudbineysaa baqtiga maleeshiyaatkii lagu xasuuqay saldhigga iyo gaadiidkii ganiimada ahaa ee cadowga kaga cararay bartanka wadada.
Sidoo kale wuxuu filimku soo gudbineyaa weeraro xoog ku gal ah oo Mujaahidiintu ku iqtixaameen magaalooyinka Afgooye iyo Ceel-Waaq halkaas oo lagu burburiyey difaacyadii cadowga, lagu laayey qaar ka mid ah murtadiinta. Kaamiradu waxay soo gudbineysaa ciidamada Mujaahidiinta oo ku roon-deenaya xaafadaha degmada Afgooye iyo dadka deegaanka oo qalbi furan ku qaabilanaya Mujaahidiinta.
Filimkan wuxuu yimid maalin ka dib markii Mu’asasada Al-kataa’ib ay baahisay Kalimad uu jeediyey Sheykh Abuu Cubeydah Axmad Cumar –Xafidahullaah- Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab kaas oo si qoto dheer kaga hadlay waxa AMISOM ay ka dhaxashay duulllaanka 10 sano jirsaday iyo waxa Muslimiintu ka faa’ideen.
Muuqaalkan cusub ee Al-kataa’ib wuxuu sii adkeynaya, soona bandhigayaa in badan oo ka mid ah injaazaadka ay xaqiijiyeen Mujaahidiinta ee uu sheekhu kalimada ku sheegay hadey tahay guulaha military ee ay gaareen Mujaahidiinta iyo kalsoonida ay beereen Mujaahidiinta.
Balse Intaas oo kaliya kagama tagine, Waxaa mu’asasada Al-kataa’ib iyadoo fursadan ka faa’ideysanaysa ay talooyin siinayaan Mujaahidiinta Shaam ee hortaagan saliibiga bari iyo kuwa galbeed iyo Maleeshiyaatka raafidada iyo kuwa Nuseyriga, waxayna soo gudbineysaa Nasaa’ix iyo talooyin uu jeediyo Sheykh Dr-Ayman Ad-Dawaahir kaas Mujaahidiinta Shaam kula talinaya isla taladii uu shan sano ka hor siiyey Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee Allaah fadligii lagu liibaanay.
Wuxuu ugu baaqayaa in ay qaataan Istaraatiijiyada dagaalka Xarbul-Cisaabaatka, Jihaadkana ka dhigaan mid caalami ah oo aan aqoonsaneyn xuduudaha gacan ku sameyska ah Saaykis Wa Biiko.